Jürgen Klopp oo ka hadlay isku aadkii xalay la sameeyay ee tartanka Champions League – Gool FM
(Liverpool) 27 Agoosto 2021. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Group -ka ay kooxdiisa ka gashay heerka Group -yada tartanka Champions League uu yahay mid adag.
Waxaa xalay la sameeysay isku aadka heerka Group -yada tartanka Champions League xilli ciyaareedka 2021-2022, kaasoo lagu sameeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Kooxda Liverpool oo tartanka Champions League ku guuleysatay 6 jeer taariikhda, ayaa isku aadkii xalay lagu sameeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ka gashay Group –ka B oo ay kula jiraan kooxaha Atletico Madrid, Porto, iyo AC Milan.
Haddaba sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Star” ee dalka Ingiriiska, Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, wuxuu ku sheegay:
“Isku aadka kaddib waan qoslay, aad ayaan u qoslay, sababtoo ah, sida muuqata waa Group aad u adag.”
“Kani waa Champions League, waa inaad wajahdaa kooxaha ugu fiican Yurub, sida iska cad qaar ka mid ah kooxahaas waxay ku jiri doonaan group –keena.”
“Waxaan mar hore la ciyaarnay Porto mana aqaan inta jeer ay tahay, xisaabtuna taariikh ahaan waxay u furan tahay Atletico Madrid iyo AC Milan, marka waxaan u malaynayaa in taageerayaasheena ay tahay inay sugaan tartanka, waana samayn doonaa dabcan.”
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay:
“Wali waxaan nahay kuwo hami leh, waxaana dooneynaa inaan muujino shaqada adag laga soo bilaabo sanadkii hore.”
Si kastaba ha ahaatee, Klopp ayaa Liverpool ku hoggaamiyay hanashada Champions League xilli ciyaareedkii 2018/19, kaddib markii ay kulankii finalka ahaa ay ku garaaceen Tottenham Hotspur natiijo 2-0 ah.